Huffka Huffington | Martech Zone
Huff la Huffington
Isniin, April 18, 2011 Sabtida, Oktoobar 29, 2011 Douglas Karr
Haddii aanad maqal, waxaa jira a $ 105 milyan oo dacwad ficil ah ka dhanka ah Arianna Huffington oo u iibinaysa AOL laakiin aan wax mushahar ah siinin dadka wax qora ee wax ku qora barta internet-ka ee ka caawiyay horumarinta Huffington Post bulshada xoogga wax ku qorta ee wax qorta. Waxaan ka boodi doonaa nacasnimada taajirnimada bidix ee samaysa rubuc bilyan doolar dhabarka kuwa kale (hoog!)… Oo toos u abaaro barta.
Sida nin ka badan 50 bloggers oo xilliyo halkan ku qoro halkan Martech Zone, Gebi ahaanba la heshii bloggers-ka aan mushaharka la siinin. Waxay mudan yihiin magdhaw.
Martech Zone waxay hoos u dhigeysaa xoogaa lacag ah oo kafaalaqaad iyo xayeysiin ah, laakiin waxaan sii wadeynaa inaan dib ugu maalgalino lacagahaas suuq geynta, qaabeynta, iyo balaarinta podcasting, emayl iyo video. Waxaan sidoo kale sii wadaynaa hagaajinta xawaaraha goobta iyo xasilloonida. Markaa… haddii aad dhammaan tirisay, wali waxaan ku shaqeyneynaa qasaare.
Aniguna si daacad ah ayaan u jecelahay habkaas waxaanan ku sii wadi doonaa inaan ku shaqeeyo qasaaro illaa iyo inta ay ka kooban tahay waxyaabahayagu ay soo hagaagayaan oo aan sii wadayno inaan kor u qaadno aqrinteenna. Qorayaashayada midkoodna weligood iguma talin inaan sameeyo wax ka duwan. Waxaan aaminsanahay inay qadarinayaan iftiinka iyo fursada ay wax ugu qoraan xirfadleyda suuqgeynta ugu fiican meeraha.
Taasi waxay tiri, uma maleynayo inay arrin aad u adag tahay. Arianna Huffington iyo shaqaalaheeda waxay si fudud ku fulin lahaayeen Analytics waxayna cadeeyeen barta wax ku qora ee barta ugu qiimaha badan (taraafikada). Waxay sidoo kale ku horumarin kari lahaayeen xoogaa falanqeyn kharash oo muhiim ah oo ku saabsan xayeysiinta, dhiirrigelinta, iyo maalgashiga kaabayaasha ay sameeyeen. Ugu dambeyntiina, waxaan rumeysanahay in howsha Huffington ay sidaa sameysay, waxay kala xaajoon laheyd isbeddel wanaagsan oo isbeddel ah ee boggageeda kuwaas oo bixiyay qiimaha ugu badan.
Taasi waxay tiri, Arianna waxay hadda haysataa rubuc bilyan oo doolar oo ay ku maal gashato difaac weyn… taas oo u badan inaysan u baahnaan doonin inay sameyso wax ka badan oo tilmaamaysa shuruudaha adeegyadooda ee qof walba ogolaaday markii la qorayay. Forbes waxay oggoshahay inay tahay a muddo dheer.
Runta dabcan, waa taas inay jirto sinaba dacwaddu uma guuleysan karto. Hadday sidaas sameyso, xubin kasta oo ka tirsan Facebook waxaa lagu leeyahay deyn xoogaa ah, natiijo kasta oo mashiin raadin ah oo Google ka mid ah waxaa lagu leeyahay lacag bixinta gujin kasta oo ay soo saarto, tweet kasta waxaa laga yaabaa inuu ku kaco dhowr senti barta tweeter-ka - oo ka eryo dhammaan shirkadahaas ee ganacsiga. Ma dhici doonto. Mararka qaar noloshu cadaalad ma ahan - tani waa mid ka mid ah waqtiyadaas.
Waxaan ku dhiirrigelinayaa ganacsi kasta inuu ka baxo kuwaan free dhufto ee bilaabaan lahaanshaha waxyaabaha ay ka kooban yihiin. Haddii aad karti u leedahay inaad qoro nuxur soo jiita dhagaystayaasha, maxaad adduunka ugu siineysaa taas qof kale sida Huffington? Ha sameyn! Xoqo oo ka shaqee waxyaabahaaga u gaarka ah dakhli. Ku samee boostada martida halkan iyo halkaas iyada oo ujeedadu tahay inaad ku soo celiso taraafikadaas boggaaga. Waa sababta aan si adag ugu shaqeyneyno inaan si muuqata ugu soo bandhigno qorayaasheena hoose iyo gees-gees.
Dabcan, haddii AOL jeclaan lahaa inuu iibsado Martech Zone $ 250 milyan (ama xitaa $ 25 milyan), waxaan ku faraxsanaan doonaa inaan u qaybiyo doolarka kuwa ugu qiimaha badan goobta. Mawduucu qiimo maleh mooyee inuu keeno martida mooyee. Arianna Huffington waxay ahayd inay garwaaqsato qiimaha ay qaar ka mid ah qorayaasheeda wax qora ay keeneen.
Ganacsi oo dhami waa Deegaanka
Xawaare Sare WordPress oo leh Amazon iyo W3 Total Cache